Taura nezve mhedzisiro yeongororo yemhepo muzvivakwa zvinotarisirwa neOta Ward Cultural Promotion Association mu2021 | Ota Ward Cultural Promotion Association
Kuenderera mberi kubva gore rapfuura, iyo Ota Ward Cultural Promotion Association yakabvunza VaTomoaki Okuda, purofesa weDhipatimendi reApplied Chemistry, Kitsi yeSainzi neTekinoroji, Keio University, kuti atarise mamiriro emhepo yeOta Ward Ryuko Memorial Hall, iri nzvimbo yekutarisira, muna Nyamavhuvhu 2021. Ndakaongorora.
Iyi ongororo yakavakirwa pakupararira kweiyo nyowani coronavirus hutachiona mukubata kuratidzira kwekudyidzana "Ryuko Kawabata vs. Ryutaro Takahashi Collection-Makoto Aida, Tomoko Koike, Hisashi Tenmyouya, Akira Yamaguchi-", iyo inotarisirwa kukwezva vashanyi vazhinji kupfuura zvakajairwa. Yakaitwa kuti isimbise kuti kufefetedza, chinova chinhu chakakosha chekudzivirira, chiri kuitwa zvakakwana.
Ryuko Chirangaridzo Horo Yemhepo mamiriro ekuongorora mhedzisiro (pfupiso vhezheni, 2 mapeji akazara)
Ryuko Memorial Hall Ventilation Ongororo Ongororo (4 mapeji muhuwandu)
Carbon dioxide (CO) uchishandisa chando chakaoma2) Zvinotaridza kuti gasi rinogadzirwa uye rinopararira munzvimbo yekuratidzira yeRyuko Memorial Hall.
CO2Kuyera michina yakaiswa munzvimbo se8 munzvimbo yekuratidzira yekuyera